Etu ị ga-esi nwetaghachi foto WhatsApp mebiri emebi - Mobile Forum | Nzukọ Ekwentị
Etu ị ga-esi nwetaghachi foto WhatsApp mebiri emebi
Ignacio Sala | | Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet, WhatsApp
WhatsApp fọrọ nke nta ka ọ bụrụ site na mbata ya na ahịa ama na (2009 na iOS na 2010 na gam akporo) na kacha eji ngwa gburugburu ụwa izipu ozi ma ọ bụ ụdị ọ bụla nke ọdịnaya dị iche iche, yana ịkpọ oku na vidiyo na-echefughị ​​ozi ọnụnụ.
Ngwa mbụ ndị ọrụ niile rụnyere na ngwaọrụ ọhụrụ gị ma ọ bụ mgbe ị weghachite ya na ncha bụ WhatsApp. N'ịbụ otu n'ime ngwa kachasị eji eme ihe gburugburu ụwa, ọtụtụ ndị ọrụ emeela ya isi ihe ọmụma ha, usoro maka izipu ihe oyiyi na vidiyo, ịkpọ oku na oku vidiyo ...
Mana ọ bụghị ihe niile dị mma na WhatsApp. Ndabara ngwa ntọala mgbe anyị natara onyonyo ma ọ bụ vidiyo (anaghị eme na ọdịyo ozi) ka atọrọ ka echekwara ọdịnaya na ngwaọrụYabụ, ọ bụrụ na anyị bụ ndị ọrụ na-arụsi ọrụ ike bụ ndị na-eziga ma nata (ọkachasị nke ikpeazụ) ọdịnaya nke ọtụtụ ọdịnaya, otu anyị nwere ike mejupụta ụdị ọdịnaya a ngwa ngwa, ọdịnaya na oge ole na ole anyị nwere ike ịdebe.
Ọ bụrụ na anyị akpachara anya iji gbanwee nhazi WhatsApp ka ọdịnaya niile anyị natara anaghị echekwa na ngwaọrụ anyị ma ọ dị nwute na anyị na-ahụ na ihe oyiyi echekwara na ngwaọrụ anyị Emebiwo ya, ọ naghị egosipụta nke ọma, ma ọ bụ na-enye mperi n'oge a na-agụ ihe anyị hụrụ nsogbu.
Nsogbu a nwere ngwọta dị mfe karịa ka ọ nwere ike ịdị na mbụ. Ọ bụrụ na ị chọrọ ịmata esi nwetaghachi foto WhatsApp mebiri emebi M na-agba gị ume ka ị gbasoo ndụmọdụ ndị anyị na-egosi gị n'okpuru.
1 Laghachi na nkata ebe anyị butere ya
1.1 Kedu ka anyị ga-esi amata afọ ole ihe oyiyi ahụ dị?
2 Jụọ onye na-ewepụta ya ọzọ
4 Foto Google
6 Ọrụ nchekwa ndị ọzọ
7 Image mgbake software
7.1 Naghachi-ehichapụ foto
7.2 Naghachi-ehichapụ foto
Laghachi na nkata ebe anyị butere ya
Tupu anyị nwee ụjọ na-eche na anyị agaghị enwe ike iweghachite ihe oyiyi na ndụ, ihe mbụ anyị ga-eme bụ laghachi na nkata site na ebe anyi butere onyonyo a. WhatsApp na-edekọ faịlụ multimedia na sava ya ruo ọnwa 3 ma ọ bụrụhaala na anyị ehichapụghị ihe onyonyo ahụ na nkata ma ọ bụ na anyị ehichapụla mkparịta ụka nke ọ dị.
Nke a abụghịkarị nsogbu n'ọtụtụ oge, ebe ọ bụ na a na-akọrọ ọtụtụ ihe onyonyo na vidiyo site na mkparịta ụka otu, yabụ ọ bụrụ na ọ dịbeghị ọnwa atọ ebe anyị ebudatara ya, anyị ka nwere ike ịgbake.
Kedu ka anyị ga-esi amata afọ ole ihe oyiyi ahụ dị?
Ọ bụrụ na ekesara ihe oyiyi ahụ na nkata otu otu ebe a na-ezipụ ọtụtụ narị ozi kwa ụbọchị, ọrụ ịchọta ihe oyiyi ahụ nwere ike ịdị na-agwụ ike ọ bụrụ na anyị amaghị ụbọchị. Iji mara ụbọchị e kesara ma budata ihe oyiyi, anyị nwere ike iji ngwa Google Files.
Faịlụ Google bụ ihe njikwa faili nke na-enye anyị ohere ịme mara nkọwa nke ihe oyiyi, n'ụzọ dị otú a, iji nwee ike ịgafe na mkparịta ụka otu ahụ ma nwee ike iweghachite foto ahụ mebiri emebi na ngwaọrụ anyị ọzọ.
Jụọ onye na-ewepụta ya ọzọ
Ihe enyemaka nke na - abụ oge kachasị ọsọ ma dị mfe, gafere jụọ onye kere ihe oyiyi ahụ iji zighachiri anyị ya. O yighị ka ihe onyonyo a ehichapụla ya, ebe ọ bụrụ na ịkekọrịta ya, ị ga-enwe ụfọdụ ihe pụrụ iche maka ịme ya.
Ọ bụrụ na anyị nwere ekele maka ọdịnaya anyị na-echekwa na kọmputa anyị, ị ga-yikarịrị Ndabere mbipụta nke ọdịnaya niile dị na ekwentị gị oge niile, yabụ otu usoro iji weghachite onyonyo ahụ mebiri emebi gafere weghachite nkwado ndabere na ngwaọrụ.
O doro anya, tupu anyi aghaputa oyiri nke niile oyiyi na vidiyo na anyị echekwara na ngwaọrụ nke mere na mgbe Iweghachi nkwado ndabere na mpaghara na-adịghị ehichapụ na anyị hapụ ha enweghị ike-agbake ha mfe.
Ọ bụrụ na ị na-eji ama gam akporo, ị yikarịrị ka ị na-eji Google Photos, Google's free Cloud ojii na-echekwa ebe a na-echekwa nnomi foto dị elu na foto niile na anyị na-echekwa na ngwaọrụ anyị.
Ọ bụrụ otu a, a ga-etinye folda WhatsApp ahụ na nkwado ndabere, yabụ ị ga-enwe nnomi ndabere na igwe ojii Google ebe ị nwere ike weghachite ya. Ọ bụrụ na etinyeghị folda WhatsApp, azịza nke foto Google nyere anyị abaghị uru.
Agbanyeghị na ejiri foto Google jiri ihe niile gam akporo ejiri jikwaa ya, ọtụtụ ndị ọrụ iPhone na-ejikwa ya. Agbanyeghị, ndị a nwere azịza ọzọ akpọrọ iCloud, ọrụ nchekwa Apple. ebe a na-echekwa ihe oyiyi na vidiyo niile na anyị kere na ngwaọrụ na nke mbụ ya.
Apple na-enye ohere 5 GB nke ohere efu, oghere ezughi oke maka ọtụtụ ndị ọrụ, yabụ belụsọ na ịnwere atụmatụ akwụ ụgwọ, ihe onyonyo na vidiyo niile emere ma ọ bụ chekwaa na ngwaọrụ agaghị ahụ na igwe ojii Apple.
Ọrụ nchekwa ndị ọzọ
Mana ọ bụghị ihe niile bụ foto Google na iCloud. N'ahịa anyị nwekwara ọrụ nchekwa ndị ọzọ nwere nke na-enyere anyị aka ịme nnomi ndabere na igwe ojii nke ọdịnaya niile anyị mepụtara ma ọ bụ chekwaa na ngwaọrụ anyị. OneDrive si Microsoft, Amazon, MegaEnwere ọtụtụ ọrụ, site na ịnweta ngwa, na-enye anyị ohere ịme akwụkwọ ndabere nke ọdịnaya niile dị na nchekwa ihe oyiyi.
Image mgbake software
Ọ bụrụ na ị ruru ebe a, ọ ga-abụ na ị jisie ike weghachite onyonyo ịchọrọ. Iji ngwa mgbake ihe onyonyo bụ ihe ikpeazụ anyị nwere, akụ na-anaghị arụ ọrụ mgbe niile ebe ọ chọrọ ihe dị iche iche ma n'ọtụtụ oge, ha na-amanye anyị ịbanye na ngwanrọ a kwụrụ ụgwọ n'agbanyeghị na anyị nwekwara ike ịchọta ngwa efu nwere mgbasa ozi.
Ọ bụrụ na anyị chọrọ naghachi ihe oyiyi WhatsApp rụrụ arụ na gam akporo, na Storelọ Ahịa Play anyị nwere ngwọta dị iche iche, ha niile dabara adaba. Otú ọ dị, ọ bụrụ na ọ bụ iPhone, enweghị ngwa na-enye ohere ịrụ ọrụ a, ebe Apple anaghị ekwe ka ịnweta mgbọrọgwụ nke usoro ahụ iji nyochaa faịlụ ndị ehichapụ, yabụ ngwa niile na-azọrọ na ọ na-eme nke ahụ, ọ bụghị eziokwu. Nanị ụzọ ị ga-esi weghachite foto ma ọ bụ vidiyo ehichapụ na iOS bụ site na ngwa Foto, n'ime nchekwa ehichapụ.
Ngwa a na - enyere anyị aka ịnwetaghachi onyonyo nke ehichapụ na kọmputa anyị ma ọ bụ mebiri emebi na-enweghị ngwaọrụ anyị nwere mgbọrọgwụ mgbọrọgwụ. Ọ bụghị naanị nyocha nchekwa nke ngwaọrụ anyị kamakwa ọ na-enyocha kaadị SD ma na-akwado usoro .jpg, .jpeg na .png.
Naghachi foto ehichapụ
Developer: Nkenke nnweta
Ngwa ọzọ nke na-enye anyị nsonaazụ kacha mma mgbe ọ na-agbake na-ehichapụ ihe oyiyi ehichapụ ma ọ bụ mebiri emebi site na ngwaọrụ anyị bụ Naghachi foto ehichapụ, ngwa anyị nwere ike budata n'efu ma nwee mgbasa ozi.
Dị ka ngwa gara aga, Naghachi foto ehichapụ bụ maka nyocha ngwaọrụ anyị iji weghachite foto ehichapụ ma ọ bụ mebiri emebi, ọ dakọtara na ụdị onyonyo niile ngwaọrụ ekwesighi inwe mgbọrọgwụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Nzukọ Ekwentị » Nhazi ịkparịta ụka n'Ịntanet » Etu ị ga-esi nwetaghachi foto WhatsApp mebiri emebi
Ihe ọ bụ na otu esi achọpụta ihe SSID nke netwọọdụ Wi-Fi gị
Esi gosi faịlụ ezoro ezo na Mac